Posted by Tranquillus | Agoosto 29, 2018 | Si aad u degto oo uga shaqeyso Faransiiska
Helitaanka shaqo hadda waa mid had iyo jeer ma fududa. Iyo helitaanka shaqo ee berrinka oo soo jiidata ayaa badanaa noqon kara dhibaato. Sidaas darteed sababta aadan u abuurin shaqadaada goobta beerta nagu habboon?
Marka ugu horeysa, waa muhiim in la barto waxa macneheedu tahay in aad iskaa u shaqeysid. Way iska cadahay inaysan ku filneyn inaad noqoto madaxaaga si aad lacag u sameyso.
Waxyaabaha ugu horreeya ee la sameeyo ma ahan kuwa ugu fudud. Waa inaad heshaa aag kaa dhigi doona inaad rabto inaad kor u kacdo subax kasta, wakhti wakhti badan, shaqo waqti buuxa ah. Tusaale ahaan, haddii aad jeceshahay inaad barato, waxaad u maleyn kartaa inaad noqotid rinji, ama sawir gacmeed. Haddii aad jeceshahay inaad qorto, waxaad noqon kartaa tifaftire (blog, website-ka shirkadda, buugga ...). Doorashadu waa tiro badan, sidaas darteed mar walba ma fududa inaad doorato degaan gaar ah. Waxa kale oo aad noqon kartaa tuubiste, ama shabakada internetka, waa adiga kugu xiran! Tijaabi xirfadahaaga, ka feker mashruuc la taaban karo oo lagu gaari karo iyada oo lagu saleynayo jacaylkaaga.
Sida loo bilaabi lahaa?
Marka domainkaaga la dhigo, waa inaad adigu tababbarto. Inaad ku tiirsanaato guulaha uu gaadhay ma ahan mid ku filan in uu abuuro shaqadiisa uuna abuuro barwaaqo. Haddaba akhri buugaagta farsamada, tareenka, qaadashada fasalada, tareenka si joogto ah, wax kasta oo aad udiyaar gareyso. Sidaa darteed, marwalba waxaad joogi doontaa taariikhda qalabka, xirfadaha, iyo suuqa oo ku xiran shaqadaada.
Sidaa darteed waa inaad:
Qiimee awooda hawlahaaga
Dooro foomkaaga sharciga (ganacsadaha ama shirkadda)
Miyaan diyaar u ahay inaan noqdo madaxbanaan?
Markaa waa inaad ogaataa faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka kaa sugaya adiga oo noqda maamulahaaga. Bilawga hawlqabadku wuxuu u baahan yahay maalgelin badan, heer niyad ah oo lagu xalliyo dhibaatooyinka suurtagalka ah iyo diidmada, iyo heerka dhaqaale haddii hawlahaagu u baahan yihiin maalgelin maadi ah ama kireysiga dhismaha tusaale ahaan. U noqoshada maamulahaaga macnaheedu maaha inaad lacag samayso adigoon naftaada siin karin.
Waa inaad buuxisaa hawlo badan oo qaadan doona waqti oo badanaaba waxay dhacaan isla markaad qandaraaskaada koowaad. Waa kuwan tusaalayaal:
Hel oo kobciso macaamiishaada
Samee adeegyadiisa / heshiisyada.
Dukaanka u fur, qalabka ku amr.
Ka jawaab macaamiishaada.
Samee amarro / qandaraasyo.
Joogso dhammaan xaaladaha.
U deji hadafyadaada.
Ka feker kaydka haddii ay dhacdo hoos u dhac dakhliga.
Qodobka muhiimka ah ee aan la iska indhatirin waa sharciyada ku wareegsan sharcigaaga. Qofka iskaa u shaqeysta, waxaad noqon kartaa shirkad shirkad ama ganacsade shakhsi ah. Sidaas awgeed, si taxadar leh u eeg ka hor intaadan dooran inaad doorato si ay ugu habboonaato mashruucaaga.
Abuuri shaqadaada, faa'iidooyin badan
Bilowga dhab ahaantii way adkaan doontaa, laakiin noqoshada madaxiisa ayaa u qalma. Waxaa jira faa'iidooyin badan oo lagu bilaabi karo mashruucan.
Waxaad ku tababaran kartaa ganacsi aad jeceshahay.
Waxaad heleysaa dabacsanaan, waxaad abaabusho jadwalkaaga.
Ugu dambeyntii waxaad ku kasban doontaa dakhli fiican.
Waxaad u habeeysa dheelitirka u dhexeeya xirfadlahaaga iyo nolosha shakhsiyeed.
Waxaad xirfadahaaga u isticmaali kartaa mashaariic kala duwan oo aad ku heli kartid kuwa cusub.
Shaqada ay sameeyaan jacaylku waxay noqonayaan shaqo fiican
Sidaas darteed haddii aad rabto, aag doorasho ah, iyo baahi loo qabo in aad noqoto mid madaxbannaan, bilaw inaad bilowdid. Baro talaabooyinka aad u baahan tahay si aad u qaadatid ka hor inta aadan bilaabin inaad abuurto shaqadaada ugu fiican ee talaabo talaabo!
Sidee ayaad u abuuri kartaa shaqadaa oo aad madaxbannaaneysaa? Agoosto 29th, 2018Tranquillus
horeBaro sida loo soo bandhigo macluumaadka, dhammaan talooyinka si loo gaaro
socdaXarunta Tababarka Geela